လူမီနီယမ်ငါးဖမ်းလှေ Restore | ပဲ့ချိတ်လှေမော်တော်ပြုပြင်ခြင်း
မိမိကိုမိမိတစ်ဦးအငြိမ်းစားဆုကြေးဇူးကိုအမျှအဘိုးသစ်တစ်ခု, ပြားချပ်ချပ်အောက်ခြေလူမီနီယမ်ငါးဖမ်းလှေဝယ်ယူခဲ့သည်။ လူမီနီယမ်ကျောထို့နောက်စက်လှေများတွင်အသုံးပြုမယ့်အတော်လေးသစ်ကိုပစ္စည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသည်လှေ 1966 ရှိ "နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးမြတ်ဆုံး" ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွိုင့်အထိသူအထပ်သားထဲက, မိမိငါးဖမ်းလှေများဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ လူတွေညိတွယ်ရတဲ့လိုင်းများကိုတားဆီးဖို့လုံလောက်တဲ့ခွဲခြာနှင့်အတူငါးမျှားနိုင်အောင်လှေအများကြီးပိုရှည်သောနေ့ရက်ကာလကိုအများစုလှေထက်အရှည် 16 ခြေလျင်ခဲ့ပေမယ့်ယင်ကောင်ငါးဖမ်းများအတွက်လိုအပ်သော။ ငါသည်သူ၏မိသားစုကြီးပြင်းသကဲ့သို့ငါ၏အဖိုးလည်းကလေးတွေနှင့် grandkids နှင့်အတူစိတ်ကိုငါးဖမ်းခဲ့ထင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစကသူကိုယျတိုငျကအားလုံးကိုဖွင့် load နိုင်ကြောင်းအလုံအလောက်အလင်းသည်သူ၏အဟောင်းများကိုသစ်သားလှေထက်အများကြီးပိုမိုပေါ့ပါးခဲ့သည်။ ဤသည်လှေ, သူ့ 1963 Evinrude 3hp မော်တာများနှင့် Silvertrol trolling မော်တာတွေနဲ့အတူ, အ Irvine Travis ငါငါးမျှားဖို့သင်ယူနှင့်အတူကြီးပြင်းကြောင်းငါးဖမ်းလှေပျံသန်းတက်စေခဲ့သည်။
အကြှနျုပျ၏အဖိုးတစ်ဦးယင်ကောင်ငါးဖမ်းသမားကြီးနှင့်ငါးဖမ်းကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ငါးဖမ်း၏တစ်ခုတည်းသောကြင်နာခဲ့ပျံသန်း။ ငါသိပ်ငါသည်ငါ့အဘိုး, အဖေနှင့်အခြားမိသားစုဝင်များနှင့်အတူငါးမျှားသုံးစွဲအချိန်ကိုပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ သူဟာဘဝသင်ခန်းစာတွေကိုရှိသမျှသည်အများသောဆုံးမသွန်သင်ခြင်း, ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ထိုကဲ့သို့သောအဘိုးခဲ့ကြရန်အလွန်ကံကောင်းဖြစ်ဖို့စဉ်းစားပါ။ သူ 1981 အတွက်ကွယ်လွန်သွားပြီးနောက်, ငါ့အဘကိုမမျှမကျွန်မစိတ်ခံစားမှုနှင့် ပတ်သက်. ဆယျနှစျငါးဖမျးသှားဖို့ကိုယျ့ကိုယျကိုဆောင်ကြဉ်းနိုင်ဘူး။ အဘိုးရဲ့လှေကိုနောက် 30 + နှစ်ပေါင်းလာမယ့်ငါ့အအိမ်တွင်သွန်းအထိထို့ပြင်တက်အနာ။ ဖေဖေနဲ့ကျွန်မငါးဖမ်းသို့ပေမယ့်အသစ်များပိုမိုအဆင်ပြေ, trailered စက်လှေနှင့်အတူပြန်ရကိုပြု၏။ ဒါဟာကျနော်တို့ကိုပြန်ငါးဖမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်ကြဉ်းဝိုင်းသော Indianapolis Fly Casters နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်တယ်သောဤအချိန်ကာလအတွင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့မိသားစုကြီးပြင်းအဖြစ်ကျနော်တို့ပျော်ရွှင်စွာ Indiana ပြည်နယ်ရေကန်များနှင့် Stripper တွင်းထဲမှာယင်ကောင်ငါးဖမ်း၏အစဉ်အလာကိုဆက်လက်။ နောက်ဆုံးတော့ကျနော်တို့လူငါးဦးငါးဖမ်းလိုက်လျောညီထွေမယ်လို့နှစ်ခု Gheenoe ငါးဖမ်းလှေများရရှိခဲ့သည်။
ဒါဟာနွေဦးပေါက်ရာသီ, ငါသည်ငါ့ခမည်းတော်, ဦးလေးနှင့်သူ့သားငါ့သား, တူလေးနှင့်အတူကြီးမားတဲ့ငါးဖမ်းခရီးစဉ်စီစဉ်ထားနှင့်မကြာမီသား-In-ဥပဒကျွန်မမိသားစုသို့လက်ခံခြင်းမပြုမီယင်ကောင်ငါးဖမ်းသမားသို့စေလိုသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကအလားအလာခုနစျပါးကို လုပ်. , ကျနော်တို့အခြားလှေလိုအပ်ကြောင်းသဘောပေါက်လာ၏။ ငါသည်ငါ့သွန်း၏ဘေးထွက် သွား. ထင်းရှူးတစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်၏4လက်မကွာ brushed နှင့်အဘိုးရဲ့ဟောင်းများကိုငါးဖမ်းလှေထွက်ဆွဲငင်။ အဆိုပါလှေ 30 + နှစ်ပေါင်းထိုင်လျက်ပြီးနောက်ကြောက်မက်ဘွယ်သောပုံသဏ္ဌာန်၌ရှိ၏။ အဆိုပါသစ်သားအားလုံးပုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အတူတကွသစ်သားကျင်းပသောသော့ခလောက်အားလုံး rusted, လှေဆိုးဆိုးရွားရွားထင်းရူးတစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်ကနေစွန်းနှင့်မြေပေါ်မှာဖြစ်ခြင်းခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်။ အဘယ်သို့ငါ, ငါ့အဘိုးရဲ့လှေထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေဆိုးရွားပါစေပါပြီနိုင်မည်နည်း ဒါဟာကိုယ်က restore ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြောင်းထို့နောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါ့အဘနှင့်ဦးလေး Curt သူတို့ရဲ့ 80 ရဲ့နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့အားလုံးဒီတော့အားလုံးပိုမိုငါ့ကိုရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်လာခဲ့သည်, ငါတို့ရှိသမျှသည်အတွက်ငါးဖမ်းပျံသန်းသတိရကြောင်း, ဒီလှေ restore ပြန်အတူတကွရပါလိမ့်မယ်မည်မျှပိုပြီးငါးဖမ်းခရီးစဉ်မသိရပါဘူး။ ငါသည်ငါ့စွမ်းရည်၏အကောင်းဆုံးက restore နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးစဉ်အပေါ်သူတို့ကိုအံ့သြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ဒါဟာပုံသဏ္ဍာန်သို့ဤလှေရိုက်မှမိုဃ်းရွာစေသရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းအကြားအလုပ်လုပ်ကိုင်ခန့်နှစ်ပတ်အတွင်းငါ့ကိုယူခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါလှေငါသဲပေါက်ကွဲမှုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကြောင့်ဆေးထိုးခြင်းကြောင့်ယင်းကဲ့သို့မကောင်းတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်၌ရှိ၏။ ငါရှေ့မှာမသဲ blaster နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သော်လည်းငါ့လေထု Compressor နဲ့အသုံးပြုနိုင်ဖို့တဦးတည်းချေးပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ အဆိုပါအပေါငျးတို့သသစ်သားလှေနှင့် rusted သံမဏိသော့ခလောက်ချွတ်ပြီးပြီးနောက်, ငါသဲလူမီနီယံကိုဘှားမွငျဖို့ကဆင်းပျက်သောစပါး။ ငါလက်စတင်များအတွက်အကြှနျုပျ၏အဖိုးဝါယာကြိုးငါးခြင်းတောင်းပေါ် clip မှထိုသို့သော Fore နှင့် AFT ချိတ်အဖြစ်ရှိခဲ့ကြောင်းအနည်းငယ်ပြင်ဆင်မှုများနှင့်နှစ်ဖက်စလုံးအပေါ်အထူးလက်ကိုင်စွန့်ခွာခဲ့တယျ, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကနေဆဲကသူ့လှေခဲ့သည်ကိုသိလိမ့်မယ်။
ငါလုပျခှငျအဖြစ် utility ကိုနောက်တွဲယာဉ်ကိုအသုံးပြုများနှင့်အများရှိကြ၏ရာယိုစိမ့်, ကိုရှာဖွေရေနှင့်ပြည့်ဝ၏လှေပြည့်စေတော်မူ၏။ ငါသူမည်မျှပင် rivets အစားထိုးအသုံးပြုခဲ့ကြောင်းယခု rusted အခွံမာသီးများနှင့်သော့ခလောက်နှင့်အတူအများအပြား leaky နှင့်မြည်းကြိုးကိုဖြည် rivets အစားထိုး။ အဆိုပါယိုစိမ့်ပြင်ဆင်ရန်မှာပွီးနောကျ, ငါဆေးသုတ်မှုတ်အသုံးပြုလှေများ၏အတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင်ပန်းနှစ်ဖက်ခြယ်သပါကမူလအစွန်းအထင်းအတွက် Stripper သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့ရေထဲကနေကျန်ရစ်ခဲ့သောကွောငျ့မပြောင်းလဲအောက်ခြေထွက်ခွာ။ ငါခက်ခဲအချိန်ဧရိယာ၌ပုံမှန်အတိုင်း Hardware နဲ့ဆေးသုတ်စတိုးဆိုင်များမှာ "ငါးဖမ်းလှေဆေးသုတ်" ကိုရှာတွေ့ခဲ့ရသည်။ ငါဒေသခံဆရာယောဟနျသမင်သွားနဲ့ကျွန်မတစ်ဦးငါးဖမ်းလှေအဘို့ကောင်းသောလိမ့်မယ်နေသေးတယ်ပေးသောဆရာယောဟနျသမင်အစိမ်းရောင်လယ်ထွန်စက်ဆေးသုတ်, တစ်ဂါလံကိုဝယ်ယူတက်အနာ, ငါလက်ျာဘက်ပဲ! ငါထိုင်ခုံပလက်ဖောင်းပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်မော်တာငါဒါကြောင့်ငါသိပ်အလေးချိန် add မဟုတ်ဘူးနိုင်သကဲ့သို့နည်းနည်းသစ်သားကို အသုံးပြု. လှေများ၏ရှေ့မှောက်၌ mount trolling ။ ကျွန်မကိုလည်း transom ပေါ်တွင်သစ်သားအစားထိုး။
ငါအချို့တိုးတက်မှုစေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့အဘိုးရိုးရှင်းစွာသူ့အချိန်အတွက်ရရှိနိုင်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါကြောင်းပိုက်ဆံ, tools များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့မတိုင်မီခဲ့သောရိုးရှင်းသောလှေကူနှိုင်းယှဉ်စင်ကြယ်သောဇိမ်ခံနေသောသစ်သုံးယောက်အဆင်ပြေထိုင်ခုံကဆက်ပြောသည်။ ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ထိုင်ခုံတောင်ပေါ်ဖန်တီးခဲ့သည်။ သင်ဓါတ်ပုံတွေမှာအနီးကပ်ကြည့်ရှုလျှင်, သင်ထိုင်ခုံမျှမျှတတလှေကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဘက်ခြမ်းကနေချိန်ညှိနိုင်မတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဤသူကားငါ၏ကိုယ်ပိုင်တီထွင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါထိုင်ခုံအမြန်လွှတ်ပေးရန် swivels နှင့်အတူတပ်ဆင်ထားဆုံလည်ခဲ့ကြသည်။
အကြှနျုပျ၏အဖိုးမူလကသူသည်အလယ်တန်းထိုင်ခုံနောက်ကွယ်မှလှေအလယ်၌ထားပြီးသော trolls မော်တာနှစ်ခု6ဗို့ဘက်ထရီရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မတစ်ဦးတည်းသာ 12 ဗို့ဘက်ထရီ မှလွဲ. တူညီပြုလေ၏။ ငါရှေ့ထိုင်ခုံအောက်မှာမှလှေ၏အလယ်တွင်ထံမှတစ်ဦး "Jumper Cable ကြိုး" ပွေးချိတ်ဆက်ဖို့ trolling မော်တာပါဝါကေဘယ်လ်ရာအရပ်ဖြစ်စေသော့ခလောက်နှင့်အဝတ်လျှော်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်မကတော့ float activated bilge pump, လှေနောက်တဖန်ပေါက်ကြားစတင်ခဲ့လျှင်နေရာလေးကိုအတွက်လာလိမ့်မယ်လို့အရာတစ်ခုခုကဆက်ပြောသည်။ ကျနော်တို့ဟောင်းလှေပေါ်တစ်ဦး bilge pump မရှိခဲ့ဘူး။
ငါနေဆဲငါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ပွနျလညျထူထောငျထားတဲ့မူရင်း Evinrude 3hp Lightwin မော်တာခဲ့, သူ၏ Silvertrol ငါထသန့်စင်ခြင်းနှင့်လှေပေါ်ပြန်ထားကြောင်းမော်တာ trolling ။ ငါလျောက်ပတ်အခွန်ဆက်ရခဲ့တယ်ထင်ရာ - ငါဒါငါ "Spurgeon Indiana ပြည်နယ် Irvine Travis, ကြီး '' Stripper တွင်းကို '' တံငါသည်ပျံသန်း" ဟုဖွင့်ကိုဖန်ဆင်းအချို့စတစ်ကာရှိခဲ့လှေပျေါမှာငါ့အဘိုးရဲ့နာမညျကိုထားစေချင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
လှေတွေရဲ့ရန်၏တစ်နာရီသို့မဟုတ်ဒီတော့ပြီးနောက်လူတစ်ဦးတစ်ဦးပြတိုက်အပိုင်းအစအဖြစ်လှေထွက်ခွာအကြံပြု, ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကဖြန့်ချိခြင်းနှင့်ငါ၏အသားကုန်အံ့, Tommy ကို၎င်း, သား-In-တရားဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်, အဲလက်စ်ညနေပိုင်းတွင်ငါးဖမ်းထိုသို့ထွက်ယူပါ။ ကျွန်မမျှော်လင့်သည့်အတိုင်းလှေဿုံအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါ့အဘသည်မိမိအသက်အရွယ်နုပျိုသောနှစ်များတွင်ရှိခဲ့နှင့်အသစ်များလှေ၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးပိုမိုနှစ်သက်ချိန်ခွင်လျှာကင်းမဲ့ကြောင့်လှေထွက်သွားကြဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ Curt နဲ့ကျွန်မထဲကလှေကို ယူ. လှေ Tipping မဟုတ်နေချိန်မှာကျနော်တို့ယင်ကောင်ငါးဖမ်း၏ re-သင်ယူရှည်မေ့လျော့အနုပညာခဲ့သဘောပေါက်လာတယ်။ Curt နဲ့ကျွန်မငါတို့သည်သင်တို့၏အငယ်နှစ်များတွင်တို့သတိပြုရကြမည်ခဲ့ရတယ်ထက်အများကြီးပိုလေးဖြစ်ကြသည်။ လှေ၌ငါ့ငှက်ခွေးခွင့်ပြုမယ့်သိပ်အန္တရာယ်ဖြစ်သက်သေပြသော်လည်း, နောက်ဆုံးတော့ကျနော်တို့အပေါ်ဖမ်းမိခြင်းနှင့်နောက်တစ်ကြိမ်ကြောင့်လှေထဲကပျော်စရာငါးဖမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။